Precambrian Eon: wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato | Saadaasha Shabakadda
Precambrian Eon: wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato
Maanta waxaan u dhaqaaqi doonnaa bilowga calaamadda waqtiga cilmiga dhulka. Eon-kii ugu horreeyay ee calaamadeeya taariikhda meeraheenna. Waxay ku saabsan tahay Precambrian. Kani waa erey gaboobay, laakiin si ballaadhan loogu adeegsaday in lagu muujiyo muddada Dhulka intaan dhagaxyada la samayn. Waxaan u socon doonnaa bilowga Dhulka, oo ku dhow muddo dhismihiisa. Fossils ayaa la helay taas oo lagu aqoonsan karo qaar ka mid ah dhagaxyada Precambrian. Waxaa sidoo kale loo yaqaan "nolosha madow."
Haddii aad rabto inaad ogaato wax kasta oo la xiriira xilligan meeraheenna, qoraalkan waxaan kuugu sheegi doonaa wax walba. Kaliya waa inaad sii wadataa akhriska 🙂
1 Billowga meeraha
3 Qadiimiga ah
Abuuritaanka nidaamka qorraxda
Precambrian wuxuu daboolaa ku dhowaad 90% dhammaan taariikhda Dunida. Si si fiican loo barto, waxaa loo qaybiyay saddex xilli: Azoic, Archaic iyo Proterozoic. Eon-ka 'Precambrian eon' waa midka ay ku jiraan dhammaan waqtiyada juqraafiga ka hor 600 milyan oo sano. Eon-kan waxaa lagu qeexay inuu yahay kii ka horreeyay Cambrian Period. Si kastaba ha noqotee, maanta, si kastaba ha ahaatee, waxaa la ogsoon yahay in nolosha Adduunyadu ay ka bilaabatay bilowgii Archaic iyo in noolaha ay lafahoodu noqdeen kuwo aad u tiro badan.
Labada qaybood ee Precambrian leeyahay waa Archaean iyo Proterozoic. Kani waa kan ugu da'da weyn. Dhagaxyada ka yar 600 milyan oo sano ayaa loo arkaa inay ku jiraan gudaha Phanerozoic.
Muddada Eon-kan ayaa ka bilaabmaysa aasaaskii meeraheenna qiyaastii 4.600 bilyan oo sano ka hor illaa kala duwanaanta cilmiga dhulka. Waa markii ugu horreysay ee noolayaal badan oo loo yaqaanno Qarax Cambrian u muuqday in Cambrian uu bilaabmayo. Tani waxay taariikhaysan tahay 542 milyan oo sano ka hor.
Waxaa jira saynisyahano qaar oo tixgeliya jiritaanka waagii afraad Precambrian gudaheeda oo la yiraahdo Chaotian iyo inay ka horreyso kuwa kale oo dhan. Waxay u dhigantaa waqtigii ugu horreeyay ee la sameeyay nidaamkeenna qorraxda.
Xilligan koowaad ayaa dhacay inta udhaxeysa 4.600 bilyan oo sano iyo 4.000 bilyan sano kadib samayskii dhulkeenna. Nidaamka qorraxda ee xilligaas wuxuu ka samaysmayay daruuro boor iyo gaas ah oo loo yaqaan 'nebula' qoraxda. Nebula-kani wuxuu dhaliyey xiddigood, majaajillo, dayaxyo, iyo meereyaal.
Waxaa aragti ahaan loo qaatay in haddii Dhulku ay isku dhacaan planetoid weyn oo Mars ah oo la yiraahdo Theia. Waa suurtagal in shilkan wuxuu ku dari lahaa 10% oogada Dhulka. Qashinkii ka dhashay isku dhacaas ayaa laysku daray si loo sameeyo dayaxa.
Waxaa jira dhagaxyo aad u yar oo ka yimid xilligii Azoic. Kaliya dhowr qaybood oo macdano ah ayaa haray kuwaas oo laga helay dhulka hoose ee sandstone ee Australia. Si kastaba ha noqotee, daraasado badan ayaa lagu sameeyay qaabeynta dayaxa. Dhammaantood waxay ku soo gabagabeynayaan in Dhulka ay duqeeyeen isku dhacyo badan oo asteroid ah xilligii Azoic oo dhan.
Xilligan dhammaan dusha sare ee Dhulka ayaa burbursanaa. Badaha baddu waxay ahaayeen dhagxaan dareere ah, baaruud karkaraya, iyo godad saameyn ku leh meel kasta. Fulkaanaha ayaa si firfircoon uga hawl-galay dhammaan meeraha meeraha. Waxa kale oo jiray maydhasho dhagaxyo iyo xiddigood aan weligood dhammaanayn. Hawada ayaa ahayd mid kulul, qaro weyn, oo ay ka buuxaan boodh iyo wasakh. Waqtigaas ka dib nolosha ma jiri karno sidaan maanta ku naqaano, maadaama hawadu ka kooban tahay kaarboon laba ogsaydh iyo uumiga biyaha. Waxay lahayd waxoogaa raad ah nitrogen iyo baaruud xeryahooda.
Magaca macnihiisu waa mid qadiimi ah ama hore. Waa xilli bilaabmaya qiyaastii 4.000 bilyan oo sano ka hor. Waxyaabihii way ka bedeleen waagii hore. Inta badan uumiga biyaha ee hawada ku jiray ayaa qaboojiyay oo sameeyay badda adduunka. Inta badan kaarboon laba ogsaydhku sidoo kale way baxeen si ay ugu beddelaan nuuradda oo lagu xareeyo sagxadda badda.
Casrigan cimiladu waxay ka samaysnayd nitrogen oo cirka waxaa ka buuxay daruuro iyo roob caadi ah. Lava-ga ayaa bilaabay inuu qaboobo si uu u sameeyo dabaqa badda. Qaar badan oo fulkaano firfircoon ayaa wali tilmaamaya in xudunta Dhulka ay wali kulushahay. Fulkaanaha ayaa sameysanayay jasiirado yaryar oo, xilligaas, ahaa dhulka keliya ee halkaas ku yaal.
Jasiiradaha yar-yar ayaa isku dhacay si ay u samaystaan ​​kuwa waaweyn oo, markaa, kuwani way isku dhacaan si ay u sameeyaan qaaradaha.
Nolosha, kaliya algae-hal unug ayaa ka jiray gunta baddaha. Cufnaanta dhulka ayaa ku filneyd inay degto jawi yaraanaya oo ka kooban methane, ammonia iyo gaasas kale. Taasi waa markii noolaha methanogenic uu jiray. Biyaha ka soo baxa majaajiladaha iyo macdanta qoyan ee ku ururay jawiga. Waxaa jiray roobab mahiigaanno ah oo isdaba joog ah oo heerar heerar ah oo sameeyay badaha ugu horreeya ee biyaha dareeraha ah.
Qaaraddihii ugu horreeyay ee Precambrian way ka duwanaayeen waxa aan maanta naqaano: way yaraayeen waxayna lahaayeen dusha sare ee dhagxaan qiiro leh. Nolol kuma dul noolaan iyaga. Sababtoo ah awoodda joogtada ah ee qolofta dhulka oo yaraatay oo qaboojinaysay, xoogaggu waxay ku urureen hoosta waxayna ku riixeen tirada dadka dhulka kor. Tani waxay sababtay samaysanka buuro dhaadheer iyo taag-gacmeedyo laga dhisay badda korkeeda.
Waxaan galnay xilligii ugu dambeeyay ee Precambrian. Waxaa sidoo kale loo yaqaan 'Cryptozoic', oo macnaheedu yahay nolosha qarsoon. Waxay bilaabatay qiyaastii 2.500 bilyan sano ka hor. Dhagax ku filan ayaa laga sameeyay gaashaammada si loo bilaabo geeddi-socodka cilmiga dhulka. Tani waxay bilaabatay saxanka farsamada casriga ah.
Waqtigaan, waxaa jiray nooleyaal prokaryotic ah iyo xoogaa cilaaqaad wadaag ah oo udhaxeeya noolaha. Waqtiga ka dib, xiriirka cilaaqaadka wuxuu ahaa mid joogto ah iyo isbadalka joogtada ah ee tamarta wuxuu u socday dhisida chloroplasts iyo mitochondria. Waxay ahaayeen unugyadii ugu horreeyay eukaryotic.
Qiyaastii 1.200 bilyan sano ka hor, saxanka tektoonikada ayaa ku qasbay dhagaxa gaashaanka inuu isku dhaco, sameynta Rodinia (waa eray Ruushka ah oo macnihiisu yahay "dhulka hooyada"), waa qaaraddii ugu horreysay dunida. Biyaha xeebta ee qaaraddan weyn waxaa ku hareeraysnaa algae sawir-qaade ah. Hawsha sawir-qaadista waxay ku sii daraysay oksijiin jawiga. Tani waxay sababtay in noolaha methanogenic la waayo.
Da 'baraf yar ka dib, nooluhu wuxuu lahaa kala duwanaansho degdeg ah. Qaar badan oo ka mid ah noolaha waxay ahaayeen cnidarians la mid ah jellyfish. Markii noolaha jilicsan ay ka dhasheen nooleyaal aad u sharaxan, Eon-ka loo yaqaan 'Precambrian eon' ayaa soo afjarmay si uu u bilaabo eon-ta hadda jirta ee loo yaqaan Phanerozoic.
Macluumaadkan waxaad awoodi doontaa inaad ku ogaato wax badan oo ku saabsan taariikhda dhulkeenna.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Ciencia » Precambrian Eon: wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato
Waa maxay jaantuska cimilada sideese loo fasirtaa?